एक बोतल रक्सीको ४५ लाख ! — Sanchar Kendra
एक बोतल रक्सीको ४५ लाख !
यो सँसारकै सबैभन्दा महङ्गो रक्सी हो । यसेन्सिया २००८ नामको यो रक्सी निर्माता कम्पनि हो रोयल टोकाजी । साँढे एक लिटरको बोतलमा यो रक्सी भरिएको छ । बोतलको डिजाइनर हुन् हँगेरीका कलाकार जेम्स कारकास ।
४० हजार डलर अर्थात् ४५ लाख नेपाली रुपैयाँ मूल्यको यसेन्सिया २००८ कस्ले किन्ला भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । रक्सी विक्री भइरहेको छ । केही दिनमै ११ वटा बोतल विक्री भइसकेको छ । यसको अर्थ साँढे चार लाख डलर मूल्य बराबरको यो रक्सी विक्री भइसकेको छ । रक्सीको म्याद सन् २३०० सम्म छ ।
यसको अर्थ रक्सीको मूल्य भविष्यमा झन् बढी हुनसक्छ र बढीभन्दा बढी विक्रीवितरण हुनेछ । एसेन्सीयामा रक्सीको प्रतिशत ४ प्रतिशत मात्र छ । रक्सी निकै सुगन्धित छ । यसमा मह, चीया र खुर्पानीको मिश्रण राखिएको छ । यो रक्सी चम्चामा राखेर दिइन्छ । -एजेन्सी